ပူးပေါင်းပြီးအတွင်း CDG လိင်ဂိမ်းများယနေ့အချိန်တွင်!
တင်ဆောင်လာမိတ်ဆွေ:ဒါဟာအသင်းမှာ CDG လိင်ဂိမ်းများ! အသောသူတို့အဘို့နှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောစီမံကိန်း:အာင္ကူညီခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ချပြီးထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းဖြစ်နိုင်။ ဒါဟာသွားလာရင်းမှအစက်အပြောက်အဘို့အွန်လိုင်း–မည်သူမဆိုလူတိုင်း–ချစ်သောသူညစ်ညမ်း။ ကျနော်တို့ဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အတူတကွသွင်းထားကမ္ဘာ့လူတန်းစားစုဆောင်းဖြန့်ချိလိမ့်မည်ကြောင်းရှိသည်သင်ပစ်ခတ်မှုအထူကြိုးအပူပည္ဆိုင္ရာအတွက်အချိန်မှာအားလုံး။ မရိုက်ပုတ်ချုံပတ်လည်မှာဒီမှာပါ:နောက်ကွယ်ရှိအခြေခံအကြောင်းရင်းနှင့်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်အောင်ရှုပ်များချွတ်နေစဉ်။, ကျနော်တို့သေချာမျှော်လင့်နေအထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်၊ဤအသောကြောင့်တစ်လက်ဖောက်သွားမယ့်သင်အကျောက်အစိုင်အခဲမိနစ်တစ်ဦးအမှု၌။ သင်ရှိစေခြင်းငှါသတိပြုမိရေး၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုဂိမ်းကစား–အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲ–အတော်လေးဆင်းရဲသူ။ ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ဖွင့်ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းဇောက်ထိုးထွက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သော၊ထိပ်တန်း-အဆင့်ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံမှကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်စုဆောင်း။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်သွားမယ့်ဘာကိုအပေါ်ဒီမှာ၊ဖတ်ချအောက်တွင်:ကျွန်မဖြစ်လိမ့်မယ်သေချာဖြည့်စွက်ရန်သင်မှာ။, နောက်တစ်နည်း၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ခြားနားချက်ကြောင်းအကြားတည်ရှိပြီးနှင့်အခြားယောက်ျားတွေထွက်ရှိသောပူဇော်သက္ကာ smutty။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဒါကြောင့်နေ့ညဉ့်–နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်ကိုယ်မကြာမီလုံလောက်တဲ့!
အစဉ်အဆက်ဝယ်ယူတဲ့ဂိမ်းရိုးရှင်းစွာမကယ်မလွှတ်အဘယျသို့ကတိပြုပေး? ကောင်းစွာ၊သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းကိစ်စတှငျ:ကျနော်တို့အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နာကျင်မှုနဲ့ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ဟာကျူးလွန်ဖို့သာသင်ပေးနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏ဖျော်ဖြေရေးနှင့်၊ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊ဒါကြောင့်လုပ်နေတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ CDG လိင်ဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%အခမဲ့ကစားရန်–သင်ရှိသည်သုံးဖြုန်းဖို့တစ်ပြားလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး။, အိုး၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားဤဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနိုင်ရမှပေးဆောင်အကျိုး:ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာအတွက်ကမ်းလှမ်းချက်-ဂိမ်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းလမ်းတစ်လျှောက်သင်ကူညီမှအနည်းငယ်နှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းအပြောင်းအလဲသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဇာတ်ကောင်။ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့အရွယ်ရောက်ပြီးလုပ်ငန်းကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်:ကျနော်တို့အနေဖြင့်မပျော်ရွှင်နည်းနည်းအတွက်အရာကိုနှင့်အတူသူတို့အားယောက်ျားတွေပြုမိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသင်အကြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အခမဲ့အဘို့၊ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကျူးလွန်ရန်၎င်း၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကြောင်းသေ CDG လိင်ဂိမ်းများလိမ့်မည်ရှည်လျားဖြစ်သွား-မှခရီးသည်မည်သည့်အကြောစားချင်သောအရှုပ်များချွတ်နှင့်ဂိမ်း။, သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်အနည်းငယ်ကြော်ငြာထဲမှာ၊ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား:ဤမ-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအဘို့နှင့်အများအပြားရောင်းရင်း၊ကိုယ့်ဘယ်အရာကိုသူတို့အလိုရှိသည်ဖို့လက်လှမ်း!
ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များ ၃၃ ဂိမ်းအတွင်း CDG လိင်ဂိမ်းများ:မဆိုးဘူး၊အယ်? ကျနော်တို့အကြမ်းဖျင်းရည်ရွယ်ထားထုတ်ဝေဖို့ ၆ နှစ်လွန်း၊ဒါကြောင့်အပေါ်အခြေခံကြောင်းအချိန်ဇယား၊ဒါကြောင့်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုအရှည်မှာအားလုံးအထိက်မှတ်အသား။ နေစဉ်ကျနော်တို့ယုံကြည်တယ်ပင်တွန်းထဲက ၁၀ ဒါမှမဟုတ်ပင် ၁၂ ဂိမ်းများအနှစ်၊ကျနော်တို့သတင်းစာမိမိကိုယ်ကိုမိမိမှကြွလာသောအခါအရည်အသွေး။ ဝေသာကောင်းလျှင်အခြေခံထုတ်ကုန်ကောင်း၊မှန်သော? ဒါဟာအာရုံစိုက်ဖို့ပိုကောင်းအပေါ်ဖြန့်ဝေထိပ်တန်းထစ် smutty ဂိမ်းကစားမယ့်အစားအနိမ့်အရည်အသွေးလွှတ်ပေးသောအဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ်လိုလားကစားရန်။, အပြာဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအမာရွတ်အားဖြင့်တစ်ဦးသမိုင်း၏shitty၊ဘတ်ဂျက်-ဆင့်မီးေဂိမ်းများသောအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်နိူး–မကျွမ်းကျင်ပညာရှင်။ ဒါဟာခက်ခဲစေရာက္ဖူးတဲ့အတွက်အလုပ်၏ဤလိုင်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ကျနော်တို့ရရှိပါသည်သောအရာကိုနှင့်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းလာသည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းမယ်လို့ခံစားရပါဖြစ်ကြောင်းသိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသည်များအတွက်အများဆုံးတိုးတက်အောင်မြင်ညမ်းဂိမ္းပတ်လည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ? ကောင်းပြီ၊သင်ဘူးထင်တယ်အားလုံးအထူး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်:သင်အပေးအများကြီးထွက်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်အာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အရည်အသွေး။ ဂိမ်းများကြည့်ရှုရန်ရှိသည်–အကောင်းအထူးသဖြင့်အခါ၊သူတို့ရောင်းချလျက်ရှိအကြော punters ချင်သောအကြောင်းဆွဖို့လောင်စာသူတို့ရဲ့ jerking အစည်းအဝေးများ။ CDG လိင်ဂိမ်းများငှားရမ်းအကောင်းဆုံးများအတွက်အကောင်းဆုံး ၃D ဖော်ပုံများနှင့်ဒါ–အဘယ်သူမျှမကုန်ကျစရိတ်ကြီးနှမြောဖို့သေချာအောင်နောက်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ်ပွတ်နှင့်အမွောအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ တစ်နိုင်ငံမိုင်ကြိုတင်ပြီးလူတိုင်းသိသောဤအစွန်းရောက်ခြားနားချက်လုပ်မယ့်လူတွေအများကြီးအမျက်ထွက်–ကောင်းစွာအိုး!, ငါသည်လည်းသင်တို့သိရကြကုန်အံ့သုံးစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းပြုပြီးတိုက်ရိုက်အားဖြင့်သင့်-ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်လိုအပ်မည်မဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမပြည်တွင်းနှင့်သင်ကြားပြောင်းလဲထုတ်ကုန်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ(တူညီသောအီးမေးလ်နှင့်အပြိုင်မည်၏ကယ်တင်ပြည်ထောင်စုသင်တို့အဘို့အ!)။ အမှု၌သင်တို့အံ့သြနေတယ်၊ကျနော်တို့လည်းအပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်မရကြသူများအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်:ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအထူးနိမ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစုေသောတိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အောင်သေးငယ်္နှင့် GPU ဏာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆဲပျော်မွေ့မှာဂိမ်းတစ်ခုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကိုက် framerate။, ဒါကကိုဆိုလိုတယ်သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဘယ်နေရာမှာမဆို၊အချိန်မရွေး:ရုံသေချာအောင်သင်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင်ရှိသည်–ချိုမြိန်!
လူထုသက္သာပါတစ်အောင်မြင်တွမ်(ဆုချီးမြှင့်တဲ့သူတွေကိုအလုပ်အပေါ်အကောင်းဆုံးအလုပ္-လုပ္)၊အ speedrunning တယ်၊တရားဝင်ဖိုရမ်နှင့်အတူပတ်ပတ်လည် ၁၅၀ ရေးသားချက်များတစ်နေ့အအပေါင်းတို့၏ထိပ်တွင်၊တစ်ဖက်ဆာဗာရှိရာကျော်ရှိပါတယ် ၇၊၅၀၀ တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်များ။ နေရာတိုင်းအတွင်းဘက်ကိုကြည့် CDG လိင်ဂိမ်းများ၊သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်အချို့သောအသိုင်းအထာ–ကကြယ်တွေ။ အိုး၊နှင့်ငါတို့သည်လည်းအများကြီးအစီအစဉ်များအတွက်အနာဂတ်နှင့်အတူ၊ပိုပြီးဆု၊ပိုကောင်းခြေရာကောက်ခြင်းနှင့်အားလုံးအသစ်ဂိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်သောခြားသူများဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်များအတွက်အဆုံးစွန်သောညမ်းဆု!
ဧကန်အမှန်အားဖြင့်ယခုသင်ဖူးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အစစ်အမှန်သဘောတူ:ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ခံစားအသစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဘဝကို? ဤသည်ရွှေပြည်၏အခွင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်:သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကို! ကျေးဇူးအများကြီးတစ်လျှောက်လာမယ့်ယနေ့–ငါသည်သင်တို့မြင်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ CDG လိင်ဂိမ်းသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ–ရကုန်အံ့!